नयाँबस्ती युवा क्लवद्वारा आफ्नो बार्षिकोत्सवको अवसरमा शताब्दि पुरुष सत्यमोहन जोशीको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नयाँबस्ती युवा क्लव जाेरापाटीले आफ्नो बार्षिकोत्सवको अवसरमा शताब्दि पुरुष सत्यमोहन जोशीको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । साथै युबा सम्मानमा नयाँ जीवन नेपालका राजेन्द्र प्रसाद खनाललाई सामाज सेवा र बालबालिकाको हेरचाह गरे...
महोत्तरीको गौशाला सम्सी सडकखण्डमा टिपरले ठक्कर दिँदा आज बिहान बालकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सो सडकखण्डको सम्सी गाउँपालिका–२ पर्सामा बालुवा बोकेर गौशालाबाट सम्सीतिर जाँदै गरेको ज१क...
नुवाकोटको बट्टारबजारमा प्रहरीद्वारा पाँच सेल अश्रुग्यास प्रहार , बालकको घटनास्थलमै ज्यान गएपछि स्थानीय आक्रोशित
नुवाकोटको बट्टारबजारमा बसले किच्दा एक बालकको मृत्यु भएको छ ।तारकेश्वर गाउँपालिका–६, गोर्स्याङ घर भएका प्रताप तामाङका ६ वर्षीय छोरा युनिक तामाङको बुधबार दिउँसो केरुङ यातायातको बा४ख ७५०४ नम्बरको बसले किच्दा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी...
महरा माथि थप अनुसन्धाना अस्पतालबाटै फेरी अदालत
काठमाडौँ — बलात्कारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिने भएको छ । थुनामा राखेर थप अनुसनधानको गर्न म्याद थपका लागि महरालाई अदालत हाजिर गराउन लागिएको काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख...
श्रीमतीलाई आफ्नै घरमा परपुरुषसंग भेटेपछि कुटपिट गरि श्रीमतीको हत्या !
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा एक जनाले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् ।वडा नम्बर १ भरुवाका धिरेन्द्र थापाले श्रीमती जानकी विकको कुटपिट गरि हत्या गरेका हुन् । उनले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नै घरमा परपुरुषसंग भेटेको भन्दै कुटपिट गरेका...
बस दुर्घटना ! १४ जनाको गयो ज्यान
२४ असोज, मेलम्ची । इन्द्रावती गाउँपालिका–१० मा शुक्रबार बिहान बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४ पुगेको छ । भोटसिपाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा२ख २७१५ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । सात जनाको...
कृष्णबहादुर महराको कुरा गर्दा माधवकुमार नेपाल रिसाएर यसरी गरे धमलामाथि हमला,हेर्नुहोस(भिडियो)
काठमाडौं, २१ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अगाडि बढेको कारबाहीबारे बोल्दै अनुचित काम गर्नेलाई कसैले पनि जोगाउन नहुने बताएका छन् । उनले अनुचित कार्यको कसैले संरक्षण...
काठमाण्डौ । महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कुष्णबहादुर महराको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । आइतबार पक्राउ परेका महरालाई सिंहदरबारस्थित प्रहरी चौकीमा राखिएको छ । उनलाई सुगर र प्रेसरको समस्या देखिएको हो...
दशैँ टिकाको दिन रामबहादुरको घरमा रुवाबासी,दुर्घटनामा रामबहादुरको गयो ज्यान
२१ असोज : काठमाडौँबाट बनेपातर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख ४३६७ नंको मिनिबस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा २४ प २७४० नंको मोटरसाइकल सूर्यविनायक नगरपालिका ८, भातेढिकुरमा ठक्कर खाँदा एक युवकको मृत्यु...
शिशिर भण्डारीले छोड्दै नेपाल,जाने भए अष्ट्रेलिया,खास कारण यस्तो पो रहेछ,हेर्नुहोस्(भिडियो)
शिशिर भण्डारीले छोटो समयमा दर्शकको मन जितेका छन् युटुबको होस्ट भएर । उनी एक कलाकार पनि हुन । उनले थुप्रै चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् भने कैयौ गीतपनी गाईसकेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनले गीतमा...